Xalaal Safarka Srebrenica - Makhaayadaha - Masaajidada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Srebrenica waa magaalo ay ku noolyihiin 3,000 oo qof oo ku kala nool Bosnia iyo Herzegovina, oo si fiican loogu yaqaan goobta a dil dil ah intii lagu jiray Dagaalkii Boosniya. Magaalada waxaa lagu dhawaaqay inay gabaad u tahay dadka ku nool aagga markii isir sifayn ay ka socotay agagaarka. Goobta ayaa la weeraray oo haween, rag iyo carruur ayaa lakala saaray in ka badan 8,000 oo rag ah ayaa si nidaamsan loo gawracay. Goobtaas waxay xilligaas ka talinaysay UN (nabad ilaaliyeyaal Dutch) ah.
Sida kaliya ee lagu gaari karo Srebrenica waa bas ama gaari.
Laga soo bilaabo Sarajevo inta lagu jiro maalmaha shaqada waxaa bas socda subax kasta 7:10. Tani waa baska kaliya ee ka baxa Sarajevo. Srebrenica baska dib ugu noqda Sarajevo wuxuu ka amba baxayaa 16:30 saldhigga basaska.
Tagaasida ayaa ah wadada loo maro. Waxaad taksi ka heli kartaa bartamaha magaalada illaa iyo xusuusta illaa 7 calaamadood. Xusuusta ayaa ka baxsan magaalada. Socodku malaha waa hami aad u badan. Waxay ku taal isla wadada basku u raaco Srebrenica sidaa darteed waxaad waydiisan kartaa darawalka baska inuu kuu daayo goor hore haddii aad luqadda waxoogaa taqaan.
Xusuusta Xasuuqa Srebrenica-Potočari iyo Qabuuraha. Inta soo hartay wax badan ma jiraan. Waxaad arki kartaa meesha oo ay joogeen askarta Holland. Tuulada lafteedu maahan mid aad u xiiso badan, laakiin dhab ahaantii waad la joogi kartaa reerkaaga halkan fasax yar oo 2-ilaa-4-maalmood ah oo kaliya waxaad ku raaxeysan kartaa dabeecadda iyo taariikhda hodanka ah ee aaggan. Srebrenica waxay umuuqatay inay tahay magaalo muhiim ah xilligii Roman.
Sidoo kale waxaa jira meesha loo yaqaan 'spa', oo leh ku dhowaad 40 ilo biyood oo wax lagu bogsado ah, kuwaas oo qaarkood u roon yihiin dadka qaba dhiig-yaraan, cudurrada maqaarka iyo cudurrada kale qaarkood.
Dadku badanaa waxay halkan u yimaadaan si ay u muujiyaan ixtiraamka muslimiinta (Bosnian 7,000-8,000 la dilay ama la la'yahay) dhibbanayaasha.
Bratunac oo 10 kiilomitir u jirta Srebrenica, waxaa ku yaal taallo badan oo yar yar oo Serbi ah oo loogu talagalay dhibbanayaasha dagaalka.
Barxadda magaalada waxaa ku yaal meel laga cuno. Wadada weyn waxaa ku yaal maqaaxiyo badan. Dhammaan raqiis iyo meel kasta oo aad ka heli karto cevapke.
Waxaad ka heli doontaa cunto aad u wanaagsan hoteelka maxalliga ah iyo hudheelka. Qiimaha motelku aad buu u sarreeyaa oo liiska ku yaal hoteelku sidaa uma hodan yahay, laakiin qiimayaashu way ka fiican yihiin hoteelka. Meelaha kale waxaa had iyo jeer lagaa siin doonaa cevapke, oo ah hilibka hilibka lagu dubto ee caadiga ah. Cunnooyinka waaweyn ee maxalliga ah waa inaad u tagtaa hudheelka martida loo yahay, ama haddii aad lacag badan haysato oo aad rabto wax ka sii ballaadhan waa inaad isku daydaa hudheelka.
Halkee laga joogaa Srebrenica
Magaalada waxaa ku yaal hal motel, qaar ka mid ah guryaha gaarka loo leeyahay iyo hal hudheel aad u wanaagsan.
Qiimuhu way ka yara sareeyaan waxaad filan karto, qaybtan dalka ka mid ah. Hal sariir oo motel ka mid ah waa 58 KM. Gudaha hoyga waxaad ka heli kartaa sariir 25 KM.
Baska ilaa Sarajevo wuxuu ka amba baxayaa 16:30 baska laga raaco. Basaska taga Bijeljina sidoo kale waa suurtagal. Weydii saldhiga basaska waqtiyada saxda ah.
eHalal Safarka Mart > Boosniya iyo Herzegovina Xalaal Safar > Xalaal Safarka Srebrenica